Spider-Man 3 iyo Galay Spider-Verse 2 Taariikhaha sii deynta (UPDATE) - Dhaqanka Pop
Sawirada Sony waxay u dhaqaaqaan Spider-Man 3 waxayna galayaan Taariikhaha sii deynta Spider-Verse 2 (UPDATE)
LA cusboonaysiiyay 6/9, 4:20 p.m. ET: Spider-Man: Dhex-dhexaadinta Spider-Verse 2 si rasmi ah u bilaabay wax -soo -saarka Talaadadii.
Spider-Man: In Spider-Verse 2 ayaa hadda lagu wadaa in la sii daayo Oktoobar 7, 2022. ️️ pic.twitter.com/3Ok997GIm4
- IGN (@IGN) Juun 9, 2020
Hoos ka eeg sheekada asalka ah.
Sababtoo ah dib -u -dhacyada uu sababay cudurka faafa ee coronavirus, Sony Pictures waxay u dhaqaaqday taariikhaha sii -deynta labadeeda soo socota Spider-Man filimaan.
Gelitaanka saddexaad ee aan cinwaan looga dhigin hadda ee Marvel Cinematic Universe Spider-Man taxanaha ayaa markii hore lagu waday in tiyaatarada la saaro July 16, 2021, laakiin hada wuxuu soo bixi doonaa dabayaaqada sanadka. Ku -dhawaaqiddu waxay timaaddaa iyada oo qayb ka ah toban isbeddel taariikheed oo Sony ku samaysay jadwalka sii -deyntiisa, Forbes warbixino. Spider-Man 3 hadda waxaa la soo bandhigi doonaa Noofambar 5, 2021, halka taxanaha muuqaalka leh ee Spider-Man: Gudaha Aayadda Spider-ka ayaa laga raray Abriil 8, 2022, loona wareejiyay Oktoobar 7, 2022.
Magacyada kale ee Sony gadaal ka riixday waxaa ka mid ah Ku xidhan , Qolka Baxsashada 2 , Aabbanimada , Nool , Transylvania Hotel 4 , Habeenkii , iyo Nin reer Toronto ah . Horumarka dheer Lama shaacin Filimka, oo ku saleysan ciyaarta ciyaarta fiidiyowga ee PlayStation ee isla magaca, ayaa sidoo kale dib loo dhigay laga bilaabo Luulyo 16, 2021, illaa Oktoobar 8, 2021. Lama shaacin waa filimka labaad ee ku jira liiska dib -u -dhaca guryaha Sony ee jilaya Tom Holland.
La cusbooneysiiyay Jadwalka Siideynta Wajiga 4aad ee MCU:
• Carmalada Madow - 11/6/20
• Eternals - 2/12/21
• Morbius (Sony) - 3/19/21
• Shang Chi-5/7/21
• Venom 2 (Sony) - 6/25/21
• Spider -Man 3 (Sony) - 11/5/21 (CUSUB)
• Thor: Jacayl & amp; Onkod - 2/11/22 (CUSUB)
• Dhakhtar Qariib 2 - 3/25/22 (CUSUB) pic.twitter.com/N9SKJuXmkn
- Wararka DR -ka DR (@DRMovieNews1) Abriil 24, 2020
Warka ayaa imanaya iyadoo filimada kale ee MCU ay ku dhufteen taariikho cusub. Dhakhtar La Yaab Badan Waallida Badan , oo lagu hagayo asalka Spider-Man saddex -geesoodka iyo Xumaanta Dhimatay agaasime Sam Raimi, ayaa laga riixay Nov 5, 2021 ilaa March 25, 2022. Tan afraad Thor Filimka, oo arki doona TaikaWaititi oo ku soo laabanaya kursiga agaasimaha, ayaa la soo bandhigay Febraayo 18, 2022 ilaa Febraayo 11, 2022.
sidee facebook u go'aamisaa asxaabta ay ku muujinayaan bogga astaanta
yaa ku ciyaara stanley xafiiska
weligeed ma jiri doontaa nadiifin
taariikhda geerida ee eazy-e